Bama Buddhist military and its derivative organisations used to change names and sometime pretend to use another group with different names and positions but ESSENTIALLY they are the metamorphosis or evolution or just simply using ALIAS to deceive the people of Myanmar and the world | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeBama Buddhist military and its derivative organisations used to change names and sometime pretend to use another group with different names and positions but ESSENTIALLY they are the metamorphosis or evolution or just simply using ALIAS to deceive the people of Myanmar and the world
Ein Saunt Ah Soeya of General Ne Win, Revolutionary council of Gen Ne Win, Ma Sa La or BSPP and U Ne Win (Head of Revolution Council, PM, President, Party Chairman) etc but it was essentially Ne Win asadictator only.
Later during 8888 unsuccessfully tried to hook-wink the people with Dr Mg Mg Sein Lwin etc. At last SLORC, SPDC, USPD etc up to Thein Sein’s presidency of USDP and now DASSK led NLD Gov but we all knew that Myanmar Military is still ruling as dictator with Than Shwe controlling with DIRTY BLACK hands soaked with people’s blood.
969, Ma Ba Tha toြ မန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဓမ္မဝံသာနုရက္ခိတအဖွဲ… All under Than Shwe/ Bama Buddhist Military. They were controlled by Aung Thaung, Khin Nyunt and now Shwe Mann-Min Aung Hlaing.
Now many of us understood that Communist Chinese Government and USDP co-sponsored Thura Shwe Mann’s sons and the father-in-law Zay Kabar Khin Shwe to support Ma Ba Tha-Swarn Arr Shin thugs, Rakhine extremist Dr. Aye Maung to do the Ethnic Cleansing and Religious Cleansing of Muslims of Myanmar: Myanmar Muslims and Rohingyas effectively to Cleanse their lands for Chinese projects and to divert the Myanmar people’s attention on the numerous ALREADY AGREED Chinese projects likely to be about 750.
Note: Myitsone is just ONE of the 750 projects given under-table deposits to Bama Buddhist military and USDP.
Above is my comment under…
Khin Maungoo​ with Khin Maung Oo.
April 29 at 11:07am ·
သုံးနှစ်လေးနှစ်ဆိုတဲ့အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေလုပ်ပြီး တော်တော်လေးကို အောင်မြင်အောင်လုပ်လာခဲ့ကြတယ်။သေချာတာတစ်ခုက နိုင်ငံရေးအရ ကြီးမားတဲ့အဖွဲု့စည်းကြီးတစ်ခုက ငွေကြေးရော အာဏာပိုင်ဆိုင်ရာတွေပါအထောက်အပံ့ကြီးကြီးမားမားပေးထားခဲ့လို့သာလျင်ဖြစ်တယ်။(အထောက်အထားလိုချင်ပေးမယ်)
သူတို့ဘယ်လောက်တောင်အောင်မြင်နေကြသလဲဆိုရင် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကို သူတို့အဖွဲ့ဝင်တွေ မြို့တိုင်းနယ်တိုင်းလိုလိုမှာရှိနေတယ်။သူတို့အဖွဲ့တွေရဲ့ကိုယ်ပိုင် ဂျာနယ်တိုက်တွေ မဂ္ဂဇင်းတိုက်တွေအပြင် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းအပြင် နောက်ထပ်တစ်ကျောင်းပါထပ်ဖွင့်နိုင်ဖို့စီစဉ်နေကြပါပြီ။နောက်ထပ်လည်းရှိပါသေးတယ်။
ဒါပေမဲ့သူတို့တွေဟာ တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။တရားမဝင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဒီလောက်အခြေအနေထိလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးထားကြတာ ဘယ်သူတွေရဲ့အားကိုးထောက်ပံ့မှုတွေပါဘဲ။ဒါတွေကရှင်းရှင်းလေးစဉ်းစားလို့ရနေပါတယ်။
အဓိက ဒီလေးနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာ တရားမဝင်တဲ့ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအဖြစ်ကမ္ဘာကလက်ခံထားကြတဲ့ ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကို ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူမှုမလုပ်နိုင်သေးတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ မေးခွန်းတစ်ခုလောက်ဘဲအရင်မေးကြည့်ချင်ပါတယ်။
သေချာတာတစ်ခုက ဒီအတဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေသရွေ့ ကျနော်ပြောရဲတာတစ်ခုက အမျိုးသားရင်ကြာစေ့ရေးတို့ တစ်မျိုးသားလုံးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်စဉ်တွေဘာတွေ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွေဘာတွေ မျှော်လင့်မနေကြပါနဲ့လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
← သာကေတ ကိစ္စဖြစ်သွားတဲ့ အပေါ်မှာ မွတ်စလင်တွေ နိုင်တယ်…… (ဒါပေမဲ့ ဒီအနိုင်ကို ဆက်ပြီးကယ်ရီလုပ်သွားဖို့တော့ လိုတယ်…)
Wake up ! Thidagu Sayardaw! Stop acting like wooden ladle and listen to Buddha’s teaching →